Soosaarayaasha budada 'Strawberry Powder Extract' (Soosaar Strawberry) Alaab-qeybiyeyaal, Soosaarayaal ka socda Bolise
Soosaarida budada miraha budada Strawberry
[Magac Kale] Soosaarida Strawberry
[Magaca Latin] Fragaria ananassa Duch
[Muuqaalka] Pink Fine Powder
[Qeybta la isticmaalay] Khudradda
[Waxyaabaha Firfircoon] Polyphenols & Vitamin C
[Faahfaahinta] 4: 1 ~ 20: 1
[Habka Tijaabada] HPLC TLC
1.Waxaa lagu dalban karaa qaybta dawooyinka.
Waxaa lagu codsan karaa badeecada daryeelka caafimaadka.
3.Waxaa lagu dalban karaa berrinka qurxinta.
Ku saabsan Soosaarida budada miraha ee Strawberry
Soosaarida miraha budada 'Strawberry Fruit Powder Extract' waxaa loo isticmaalaa cuntooyinka sida diyaarinta ah sida keydinta, casiirka khudradda, buskudka, kareemada jalaatada, caano caano, iyo shukulaatada.
Soosaarida Strawberry waxaa ka buuxay asiidh hydroxycinnamic, stilbenes, vitamin C, manganese, potassium, folate, omega-3 acids dufan, magnesium, copper, vitamin B-6, vitamin K, vitamin B-2 iyo vitamin B-5.